विप्लव – ताजा समाचार
विप्लव समूहका नेता गुणराज लोहनी चितवनबाट पक्राउ
ताजा समाचार । ५ कात्तिक, काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट नेता गुणराज लोहनीलाई प्रहरीले चितवनबाट पक्राउ गरेको छ। उनी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-११ बसेनीबाट पक्राउ गरेका हुन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको टोलीले सोमबार बिहान घरबाटै पक्राउ गरेको हो । एकसाताअघि नेकपा केन्द्रीय सदस्यबाट निकालिएका उनलाई सादा पोशाकको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। […]
ताजा समाचार । ३ कात्तिक, काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी नेता कार्यकर्तालाई प क्राउ गरेको वि रोधमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारवि रुद्ध सडक ब न्द लगायतका आ न्दोलन कार्यक्रम गर्ने घो षणा गरेको छ । नेकपाले केन्द्रीय सदस्य तथा मध्यपश्चिम कमान्ड इन्चार्ज वीरजंगसहित दुई दर्जन […]
काठमाडौं । प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिवले नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव)ले आफ्नो यात्रामा वाधा बन्न खोज्ने जोकोहीलाई खरानी बनाईने चेता वनी दिएका छन् । आफ्ना दर्जनौं उच्च स्तरका नेताहरु पक्रा उ परेपछि आक्रो शित बनेका विप्लवले विरो धी लाई खरानी बनाईने चेता वनी दिएका हुन् । बिहिबार एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै विप्लवले सरकारले नेकपाका राप्ती […]
६/७ वटा घर मात्र भएको गाउँबाट यसरी पक्राउ परे विप्लव समूहका २१ नेता
ताजा समाचार । ३० असोज, दाङ : मुस्किलले मुग्रेठा खोलामा ६-७ घर छन् । गाउँसम्म पुग्न मोटर बाटो हुने कुरै भएन । गोरेटो बाटो हुँदै राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर-४ मा पर्ने मुग्रेठा खोला पुगिन्छ । यो नेपाल-भारत सीमा नाका क्षेत्र पनि हो । सुरक्षाको दृष्टिले सुरक्षित गाउँ । यही गाउँबाट नेपाल प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ […]
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले भूमिगत भएर चलाएको नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी (नेकपा)को गतिविधिले सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीको भविष्य अन्धकार बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनसहितका भातृसंस्थाहरूले मोटो रकम चन्दा माग गरेर धम्की, कुटपिट, मोसो दल्ने, जनकार’बाही लगायतका गतिविधि गर्दा सर्वसाधारण फेरि आतं’कित हुन पुगेका हुन् । त्यति मात्रै होइन विप्लव निकटको अखिल क्रान्तिकारीले […]
विप्लवका छोरा प्रकाशसहित पक्राउ परेका १७ जना रिहा
काठमाडौँ – सरकारद्वारा प्रतिवन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ का छोरा प्रकाश चन्दसहित प’क्राउ परेका १७ जनालाई प्रहरीले रिहा गरेको छ । चितवन मेडिकल कलेजमा नाराबाजी गर्ने क्रममा बुधबार प’क्राउ परेका उनीहरुलाई बिहीबार बिहान रिहा गरिएको चितवनका एसपी दानबहादुर मल्लले जानकारी दिए । उनीहरु सबैलाई कलेजका सञ्चालक र आफन्तको रोहोबरमा हिरासतमुक्त गरिएको एसपी […]
विप्लवका छोरा प्रकाश चन्द प’क्राउ
काठमाडौँ – सरकारद्वारा प्रतिवन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ का छोरा प्रकाश चन्दलाई प्रहरीले प’क्राउ गरेको छ । चितवन मेडिकल कलेजबाट प्रहरीले प्रकाशसहित १७ जनालाई प’क्राउ गरेको हो । चितवन मेडिकल कलेजमा आ’न्दोलन गरिरहेका बेला प्रकाशसहितका १७ जनालाई प’क्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । अस्पतालको सेवा प्रवाहमा अव’रोध खडा […]
(झापा) । झापाको गौरादह र बिर्तामोडमा गराइएको बम वि’स्फोट घटनाको जिम्मेवारी नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाले लिएको छ । विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाका झापा जिल्ला सेक्रेटरी मनिषले अनुसन्धान मिडिया सँग फोन कुराकानीमा वि’स्फोट गराएको घटनाको जिम्मेवारी लिएका हुन् । जनताको पैसामा मस्ती गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सहकारीका व्यक्तिलाई जनताकै माग अनुसार कारबाही स्वरूप […]
प्रहरीलाई ठुलो सफलता: दिनदहाडै काठमाडौंको मुटुबाट चाइनिज पे’स्तोल सहित ८ जना प’क्राउ
काठमाडौं– रसुवाको छेदिङ्मो घर भएका २९ वर्षीय योर्साङ घले केही समय अगाडिसम्म नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता थिए । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि पार्टीका धेरै नेता भूमिगत भए । भूमिगत नेताहरुबाटै आएका निर्देशनानुसार योर्साङसहित उनका साथीहरु भने ‘पार्टीका काम’ गर्थे । पार्टीको काम गर्दा गर्दै केही साथीहरु प’क्राउ परेपछि योर्साङले ‘पार्टी’ छाड्ने […]
बंगारा सुनिएर अस्पताल पुगेका ७ वर्षे बालकको मुखभित्र हेर्दा डाक्टरनै छक्क परे….
भारतको चेन्नई शहरको सविता डेन्टल कलेजमा डाक्टरहरूले ७ वर्षको बालकको मुखबाट ५सय २६ दाँत निकालेका छन्। ‘कम्पाउण्ड कम्पोजिट ओनडोन्टओम’ नामको दु*र्लभ रोगबाट पीडित उक्त बच्चाको दाहिने बंगारा सुनिएपछि अस्पताल ल्याइएको थियो । अस्पतालका डाक्टर पी सेन्थिलनाथनले बुधवार भने, ‘बच्चाको आमा बाबुले पहिलोपटक बच्चा ३ वर्ष हुँदा बंगारा सुनिएको देखेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले ध्यान दिएनन।’ […]
टीकापुर : प्रहरीले देशभर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइरहेका बेला कैलालीमा विप्लवको पार्टीले प्रहरीविरुद्ध नै ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेको छ। ‘जनअदालत’ को नाम दिएर नेकपाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक असईलाई ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेको हो। कैलाली जनअदालत प्रमुख विकासको नामबाट शुक्रबार जारी पक्राउ पुर्जीमा राष्ट्रिय अनुसनधान विभागका असई भैरव […]
प्रहरीविरुद्ध विप्लवको ‘पक्राउ पुर्जी’ ! नटेरे ‘इन्काउ*न्टर’ को चेतावनी
टीकापुर : प्रहरीले देशभर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी मु*द्दा चलाइरहेका बेला कैलालीमा विप्लवको पार्टीले प्रहरीविरु*द्ध नै ‘पक्रा*उ पुर्जी’ जारी गरेको छ। ‘जनअदालत’ को नाम दिएर नेकपाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक असईलाई ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेको हो। कैलाली जनअदालत प्रमुख विकासको नामबाट शुक्रबार जारी पक्राउ पुर्जीमा राष्ट्रिय अनुसनधान विभागका असई भैरव […]